केन्द्र विवाद : गोकुलेश्वरमा आज पनि बिरोध प्रदर्शन - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रदेश प्रदेश ७ केन्द्र विवाद : गोकुलेश्वरमा आज पनि बिरोध प्रदर्शन
केन्द्र विवाद : गोकुलेश्वरमा आज पनि बिरोध प्रदर्शन
बैतडी । बैतडीको डिलाशैनी गाँउपालिकाको गोकुलेश्वरमा हिजोदेखि सुरु भएको बिरोध प्रदर्शन आज पनि जारी रहेको छ । केन्द्रको विवाद कायमै रहेका बेला हिजोदेखि वडा न. ४, ५, ६ र ७ का स्थानिय बासिन्दाहरुले बिरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।
बिरोधकर्ताहरुले सडकमा टायर बालेका छन् भने गोकुलेश्वरमा चक्काजाम समेत गरेका छन् । अहिले सडकमा गाडी चलेका छैनन् । उनीहरुले हिजो गाउँपालिकाका ४ वडा कार्यालयमा ताला बन्दी समेत गरेका थिए । उनीहरुले गाउँपालिकाको केन्द्र वडा न. ७ को धामीगाउँमा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
अहिले गाउँपालिकाको केन्द्र बिगतमा सम्पर्क कार्यालय तोकिएको वडा न. ३ को पङ्सेरामै बनाउने चलखेल भैरहेको भन्दै गाउँपालिकाको नेतृत्व बिरुद्ध संघर्ष गरिरहेका हुन् । गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले समेत डिलाशैनी ७ मा केन्द्र तोकेको र पछि सम्पर्क कार्यालय रहेको ठाउँमा स्थाई केन्द्र सार्ने चलखेल सुरु भएको भन्दै आफुहरुले बिरोध गरिरहेको डिलाशैनी संघर्ष समितिका जयराज जोसीले बताए ।
गाउँपालिका बासीले आन्दोलन गरिरहेको बिषयमा भने आफुलाई खासै जानकारी नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष उकेन्द्र बोहराले बताए । गाउँपालिका केन्द्रको बिवादबारे आज गाउँसभाको बैठक बसिरहेको र यस बिषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । अहिले गाउँसभा बैठक बसिरहेकोमा बिरोधकर्ताहरुले गाउँसभाको निर्णयलाई पर्खिरहेको र न्यायोचित निर्णय नआएमा झन ससक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
Editor-Picks राजेन्द्रप्रसाद पनेरु - December 4, 2020 0
किरण कौशल - August 28, 2020 0
बिचार श्याम सङ्कल्प - November 20, 2020 0
अर्थ भगीरथ भण्डारी - September 11, 2020 0